फ्री अनलाइन सेवा। स्व-स्तरीकरण भुइँ
भौतिक आत्म-समतल तल्ला को गणना
चित्र मात्रा 1: 0.5 1 1.5234567 8910
कोठा को चौडाई X
कोठा को लम्बाइ Y
एक उच्च A
एक उच्च B
एक उच्च C
एक उच्च D
न्यूनतम मोटाई F
आत्म-स्तरीकरण भुइँ को गणना
X - कोठा को चौडाई
Y - कोठा को लम्बाइ
अंक, कोठा को चार कुनामा मा उचाइ फरक उपाय A, B, C, D.
यस गर्न, निर्माण स्तर प्रयोग।
यस प्रवेश तल्ला को न्यूनतम मोटाई सेट गर्नुहोस्। यो आकार स्वतः कोठा को सबै भन्दा कम बिन्दु लागू गरिनेछ।
यो घन मिटर मा आवश्यक सामाग्री को राशि को गणना र कोठा को कुनामा मा उचाइ स्थापित गर्नेछ।
कार्यक्रम कुनामा मा उचाइ फरक संग आत्म-स्तरीकरण तल्ला लागि भौतिक को राशि गणना हुनेछ।
तपाईं अधिक सही सामाग्री को लागत को गणना गर्न सक्षम हुनेछ।
आत्म-स्तरीकरण तल्ला को मुख्य फाइदा यसको लागि प्रयोग गरिन्छ जो कि विशेष स्तरीकरण मिश्रित, आफ्नो भाग मा कुनै पनि अतिरिक्त प्रयास बिना एक तला र चिल्लो सतह सिर्जना। यस्तो भुइँ आज विशेष लोकप्रियता प्राप्त गरेका छन्।
डालो, भुइँ छुट्टै हुन सक्छ। आवश्यक छ कि सबै कोठा, कुनामा आफ्नो उचाइ, साथै भरण को एक न्यूनतम मोटाई को लम्बाइ र चौडाइ थाह छ, र त हाम्रो कार्यक्रम inclines संग भर्न तपाईं भौतिक को राशि गणना हुनेछ।
1. यस्तो भुइँ को सतह तेजी र अंतराल बिना, चिकना।
2. आत्म-स्तरीकरण भुइँ को सेवा जीवन 40-50 वर्ष आउछ।
3. प्रतिरोध लगाउँछन्।
4. विशेष हेरचाह आवश्यक पर्दैन।
ढेर पूरक तल्ला धेरै मानिसहरू विशेषज्ञहरु को सहारा बिना यो आफैलाई गर्न रुचि, राम्रो सरल छ। तर केही subtleties छन्।
तपाईं तल्ला बिछाउने खानुअघि त्यसैले, यो कोठा तयार गर्न आवश्यक छ। यस गर्न, पुरानो फर्श, baseboards र ढोका हटाउन। तल्ला सतह लगाए छ। यो एक विशेष मिसिन sanding वा तार ब्रश प्रयोग गर्न सकिन्छ। दरार भुइँमा छन् भने त्यसपछि, तिनीहरूले एक त्रिकोणीय scraper प्रयोग खुलासा।
तपाईं काठको तल्ला माथि पूरक राख्नु जाँदैछन् भने, यो एक विशेष पूर्व-ग्रिड संग प्रबलित हुनेछ भन्ने कुरा नबिर्सनुहोस्।
त्यसपछि नापयो कोण Slats तल्ला प्रयोग। यी मापन अनुसार तल्ला को उचाइ पोखे गरिनेछ जो चिह्न पर्खाल गरेका छन्। यस उचाइ, प्लस 2.5 सेन्टिमीटर मा, पर्खाल प्लास्टर र अन्य परिष्करण सामाग्री देखि साफ।
त्यसपछि तल्ला साफ छ र एक विशेष पाउडर फेरि degreased।
अब तल्ला समाधान गंदा दरार र crevices smoothes अनियमितताहरु संग गठबंधन छ। त्यसपछि, तल्ला primed गर्न आवश्यक छ। अनि यो तयारी अवस्थामा पूरा भएको छ। तपाईं तल्ला बिछाउने सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
तल्ला पूरक तयार
तल्ला भर्न समान तपाईं भर्न गर्छन् सम्म समाधान मुछ्नु गर्ने सहायक लिन्छन्।
प्याकेज निर्देशन अनुसार एक समाधान तयारी। समाधान सजातीय थियो लागि, एक पटक सबै पानी मा ट्यांक भर्न छैन। यो कुरा को एक ठूलो भाग होस्। यो समाधान मुछ्नु। यस गर्न, यो एक विशेष चुच्चो संग एक बिजुली ड्रिल प्रयोग गर्न भन्दा राम्रो छ। समाधान एक सजातीय सामूहिक परिणत गर्दा मात्र र, यो मा शेष पानी बगाउनु।
सेक्स कोठा को विपरीत कुना मा प्रवेश को ढोका तिर खन्याइएको। मिश्रण एक सुई रोलर प्रयोग सतह aligning पछि, भाग मा प्रत्येक खन्याइएको थियो। यो समाधान फसेका सक्छ जो बुलबुले हटाउन र एक समान तह प्रदान गर्दछ।
अर्को समय एक भाग देखि हालन भन्दा बढी 10 मिनेट हुनु हुँदैन।
तल्ला सुक्न समयमा, र यो समाधान को ब्रान्ड निर्भर 3-6 घन्टा र कोठा तापमान परिवर्तन मा ड्राफ्ट जोगिन।